China L-Isoleucine CAS 73-32-5 yeParamma Giredhi (USP / EP) vagadziri uye vanotengesa | Honray
L-Isoleucine CAS 73-32-5 yeParma Giredhi (USP / EP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Isoleucine
Chigadzirwa Zvivakwa: Zvinorwadza mukuravira, Zvinonyungudika mumvura uye zvishoma kusungunuka mune ethyl doro, Nzvimbo yakanyunguduka: 284 ℃.
Chigadzirwa Chigadzirwa :: L-Isoleucine
L-Isoleucine (Yakapfupikiswa Iso) ndeimwe ye18 yakajairika amino acids, uye imwe yeasere akakosha amino acids panyama yemunhu. Inonzi branched chain amino acids (BCAA) ine L-Leucine uye L-Valine pamwechete nekuti zvese zvine methyl yecheni ketani mune yavo mamorekuru mamiriro.
L-Isoleucine ndeimwe yeakakosha amino acids iyo isingagone kuitwa nemuviri uye inozivikanwa nekugona kwayo kubatsira kutsungirira uye kubatsira mukugadzirisa nekuvakazve mhasuru. Iyi amino acid yakakosha kune vavaki vemuviri sezvo ichibatsira kuwedzera simba uye kubatsira muviri kupora kubva mukudzidziswa.
Mhedzisiro yeL-Isoleucine inosanganisira kugadziriswa kwemhasuru neleucine uye valine, kudzora glucose yeropa, uye kupa nyama yemuviri nesimba. Iyo zvakare inovandudza kuburitsa kwekukura kwehomoni uye kubatsira kupisa iyo visceral mafuta. Mafuta aya ari mukati memukati memuviri uye haakwanise kunyatso kugayiwa chete kuburikidza nekudya uye kurovedza muviri.
L- Isoleucine inogona kusimudzira protein synthesis uye nekuvandudza huwandu hwekukura kwehomoni uye insulin, kuchengetedza mwero mumuviri, inogona kuwedzera immune immune, kurapa kusagadzikana kwepfungwa, kukurudzira kuwedzera kwekuda kudya uye basa rean anti-anemia, asi zvakare nekusimudzira kwe insulin insulin. Inonyanya kushandiswa mumushonga, indasitiri yezvikafu, chengetedza chiropa, chiropa chinoshanda mune mhasuru protein metabolism inonyanya kukosha. Kana kushomeka, pachave nekukundikana kwemuviri, senge mamiriro ekoma. Glycogenetic uye ketogenic amino inogona kushandiswa sekuwedzera zvinovaka muviri. Kune iyo amino acid infusion kana yemumuromo zvinovaka muviri zvekuwedzera.
Zvakanakisa zvekudya zveL-Isoleucine zvinosanganisira mupunga wakasviba, bhinzi, nyama, nzungu, chikafu chesoya uye kudya kwese. Sezvo iri mhando yakakosha yeamino acid, zvinoreva kuti haigone kuumbwa mumuviri wemunhu uye inongowanikwa kubva mukudya.
Kutenderera kwakananga [a] D20
Kutenderera kwakananga [a] D25
yakajeka & isina ruvara ≤BY6
kusvibiswa kwemunhu mumwechete0.5% kusakwana kwese≤2.0%
Zvisina kuchena zvakasviba
Pashure: L-Threonine CAS 72-19-5 yePharma Giredhi (USP)
Zvadaro: L-Threonine CAS 72-19-5 yeChikafu Giredhi (FCC / AJI / USP)
L-Threonine Pharm Giredhi, L-Valine 72-18-4, Pharm Giredhi L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Kudya Kwemhuka, L-Threonine Chikafu cheGiredhi,